S I D A | 102 KARA
Araka ny antontan-kevitra mari-pototra sy voamarina avy amin’ny zava-misy maro ,dia nambaran’i Jean MEUNIER, andro vitsivitsy lasa izay fa TETIKA NENTINA HAMPIHOROHOROANA SY HAMONGORANA fotsiny ny nampitahorana an’izao tontolo izao mikasika ny voalaza fa areti-mandoza mahafaty sy TSY MAMELA MAHAZO ny SIDA.
Koa ny MARINA mikasika ity raharaha ity izao dia mahavelom-bolo ny rehetra, sy manala azy ao anatin’ny tahotra sy horohoro naely hatramin’izay.
Iza tokoa moa no TSY HO TORAK’HOVITRA tany amin’ny taona 1980 tany ho any, raha nolazaina fa aretina TSY MISY FANAFANY ary tsy mbola nahitana fanafody na fanefitra ny SIDA ?
Voalaza ary tamin’izany fotoana izany fa raha manao fitiavana amin’ny olona iray ianao, dia tsy taminy ireny ihany no nanaovanao ny firaisan’ny nofo, fa tamin’ny olona rehetra izay efa niray taminy ihany koa.
Koa vaky bantsilana ary ankehitriny, fa araka ny antontan-taratasy ofisialy ary tao amin’ny tahirin’ny Antenimeran-doholona na ny Senat tany Etazonia, dia tsy iza fa ny Departemantan’ny Fiaovana amerikana no namorona sy nampiditra ity tsimok’aretina SIDA ity : koa tany amin’ny taona 1977 dia efa teran-tany AFRIKANINA 100 taptrisa ary lehilahy tia lehilahy na vehivavy tia vehivavy fotsy hoditra 2000 ihany koa no notsindromina ilay mody nantsoina hoe » hepatite B » tany am-boalohany.
Réputation du virus dans le Monde
Ny Filoha amerikanina Georges BUSH no nilaza tany amin’ny taona 1970 fa tokony hisy hetsika haingana hanaraha-maso sy hifehezana ny fikazakazaky ny fitomboan’ny mponina any amin’ireo tany sokajina hoe : » an-dala-pandrosoana. »
Koa FANAHY INIANA fotsiny izao izany no nampiarahana ny tsimok’aretina SIDA tamin’ny vaksiny hepatite B.
Tany amin’ny fotoana aloha tany dia niantoka AINGA sy AINA mihintsy ny filazana ny marina hoy ihany Andriamatoa Jean MEUNIER. Saingy na izany kosa aza anefa dia TSY TOKONY HANAO TOY NY SOAVALY TAPA-KOFEHY ny maro ka hitrifana etsy sy eroa, satria aoka tsy ho adinontsika fa misy dia misy tokoa ny ARETINA AVY AMIN’NY FIRAISAN’NY NOFO toy ny ANGATRA hoy ny fahalalan’ny maro azy, na efa lasa anga-maty mihintsy, ka TSY MAMELA MAHAZO izay tratrany.
Koa tsy lehiben’ny mpananatra akory raha milaza hoe : » ny mitandrina ihany no fanafodiny na koa mba manao toka-po toy ny siny ka tsy mahalala afa-tsy ny rano e…
AZA MIOMEHY IANAO E ! …
31 juillet 2013 - 5 h 30 min Divers 1582 vues